कस्ता व्यक्तिले रक्तदान गन सक्छन् ?
२o७५ कार्तिक २३ शुक्रबार| प्रकाशित o३:४५:oo
केही मानिसमा कस्ता व्यक्तिले रक्तदान गन सक्छ ? रक्तदान गरेपछि शरीरमा अन्य प्रभाव पर्छ कि भन्ने डर हुन्छ। तर त्यस्तो केही हुँदैन। महादान मानिने रक्तदानले शरीरको स्वास्थ्यका लागि आश्चर्यजक फाइदा गर्छन्। सामान्यतः १६ वर्षभन्दा बढी र ५० किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका व्यक्ति रक्तदान गर्न योग्य मानिन्छन्।